Home | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss | Page 11
Home / Archive by category Home (Page 11)
Ammaanka Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loo adkeeyay, tan iyo wixii ka dambeeyay markii 2-dii bishan qarax ka dhex dhacay gudaha Diyaaradda Daallo Airlines, taasoo keentay inay si deg deg deg ah ugu soo laabato garoonka. Hey’addaha Ammaanka dowladda ayaa si aan horay loo arag u bilaabay la socodka […]
Sweden: Kooxo cunsuriyiin ah oo bilaabay ugaarsiga Ajaanibta
Waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay kooxo cunsuriyiin ah weeraro la beegsadeen dadka soogalootiga ah oo ku sugnaa caasimada wadanka Sweden ee Stockholm. Kooxahan oo Jimcihii iyo Sabtidii lasoo dhaafay banaanbaxyo looga soo horjeedo qaxootiga ka dhigay qeybo kamid ah magaalada Stockholm ayaa la sheegay inay wadaan olole ka dhan ah dadka soogalootiga ah. […]
Ciidamada amaanka dad ay ku jiraan suxufiyiin ku xiray Bujumbura
Ciidamada amaanka ee dowlada Burundi ayaa xalay (Khamiis) hawlgalo ka sameeyey caasimada dalkaasi ee Bujumbura, waxayna sheegeen inay ku soo qabteen hub iyo dad la tuhunsan yahay oo ay ku jiraan labo suxufi oo ajnabi ah. Suxufiyiinta la xiray ayaa kasoo kala jeeda dalka France iyo UK, suxufiga Faransiiska ah ayaa u shaqeeya jariirada Le […]
Qaxooti ka badan 1200 oo ruux oo laga soo badbaadiyay xeebaha dalka Talyaaniga
Ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga ayaa shalay ka soo badbaadiyay 1,271 ruux oo saarnaa dooman ka samaysan baco iyo alwaax kuwaasoo ka soo shiraacday xeebaha dalka Libya. Maraakiibta ciidamada badda ee dalka Talyaaniga iyo markab ay leeyihiin ciidamada Milatariga dalka Slovenia ayaa ka qeybgalay howlgalkan lagu badbaadinayay dadkan soo galootiga ah. Howlgalo dadka soo galootiga ah […]
Iskahorimaad qof ku dhintay oo dhexmaray Ciidamada & Maleeshiyadii gobalka Oregon
Hal qof ayaa ku dhintay iska horimaad dhexmaray Ciidamada amaanka iyo maleeshiyaadka hubeysan ee todobaadyadii lasoo dhaafay qalalaasaha ka waday magaalada Burns ee gobalka Oregon. Ciidamada Amaanka ee ka socda hay’ada danbi baarista (FBI) ayaa Salaasadii shalay isku dayey inay qabtaan hogaamiyaha kooxda maleeshiyada horey u qabsatay xarunta Dowlada Federaalka ee Xanaanada Xoolaha iyo Duurjoogta […]
Baarlamaanka Denmark oo ansixiyey sharciga cusub ee Qaxootiga
Baarlamaanka dalka Denmark ayaa Salaasadii shalay cod aqlabiyad ah ku ansixiyey sharciga cusub ee xakameenaya xaquuqda dadka qaxootiga ah ee dalkaasi iska dhiiba. Sharcigan ayaa waxaa horey walaac looga muujiyey qaar kamid ah qodobada xeerkan cusub oo sheegaya in dowlada Denmark ay la wareegi doonto hantida ay sitaan dadka qaxootiga ah wixii ka badan (10.000kroner) […]
Turkey oo uga digtay UN-ka inuu shirka Geneva ku casumo Kooxda Kurdida PYD
Dowlada Turkey ayaa sheegtay inaysan tagi doonin shirka nabadeynta Siiriya ee Jimcaha ka furmaya magaalada Geneva hadii kulankaasi lagu casumo Jabhada Kurdida ee PYD. Wasiirka Arrimaha Dibada ee Turkey Mevlut Cavusoglu, ayaa Talaadadii shalay shaaca ka qaaday in dowladiisa aysan ka qeyb geli doonin shirweynaha Qaramada Midoobay u qaban qaabineyso waan waanta nabadeed ee Siiriya […]
Duufaano Baraf Wata oo 19 qof ku dilay gobalada bari ee Maraykanka
Duufaano baraf ah ayaa Sabtidii shalay ku habsaday gobalada bariga wadanka Maraykanka oo ay ku jiraan magaalooyinka New York iyo caasimada Washington. Duufaanta barafka wadata ayaa lagu soo waramayaa inay illaa iyo shalay dalkaasi ku dishay dad gaaraya 19 qof kuwaasi oo intooda badan ku dhintay shilalka gawaarida iyo waliba qabowga xoogaleh. Magaalada New York […]
France: Boqolaal qaxooti ah oo rabshado ka sameeyey magaalo xeebeedka Calais
Boqolaal qaxooti ayaa sabtidii shalay isku dayey inay xoog ku fuulaan dooni u socotay wadanka UK oo ka baxeysay magaalada ku taal xeebta France ee Calais. Ugu yaraan 200 qof ayaa isku dayey inay xoog ku fuulaan dooni rakaab sida ee shirkada P&O Ferries oo xiligaasi taagneyd dekkada magaalada Calais. Balse dadkaasi ayaa ku guuleysan […]
Dowlada Ugandha ayaa joojisay haweenka wadankaasi ee shaqada u doonan jiray wadanka Sucuudiga, kadib markii ay soo baxday falal jirdil iyo dhibaatooyin badan oo loo geystay muwaadiniinta dalkaasi u dhashay ee ka shaqeeya Boqortooyada Sucuudiga. Wasiirka Shaqada & Shaqaalaha Mr.Muruli Wilson Mukasa ayaa qoraal uu u qoray Wasaarada Arrimaha Dibada lagu baahiyey barta Twitterka. Go’aanka […]